လုံးဝလိုက်ဖက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက် - Lifestyle Myanmar
ကိုယ်လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ကိုယ်ရဲ့ချစ်သူက ကိုယ့်ဘဝအတွက် လက်တွဲဖော်အစစ် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို ဘယ်လိုသိရမလဲ? သင်တို့နှစ်ယောက်က ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီသူတွေဖြစ်ကြောင်း သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? အခုပြောပြပေးမယ့် အချက်လေးတွေကတော့ သင်နဲ့ သင့်ပါတနာဟာ နတ်ဖက်တဲ့ဖူးစာတွေဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက်ပါ။
၁။ ဘဝအပေါ် အကောင်းမြင်စိတ်ရှိကြပါတယ်
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေက တည်ငြိမ်သော ဆက်ဆံရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ချစ်ရသူရဲ့သတင်းကို အပြုသဘောတုံ့ပြန်ပြီး သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို မှတ်သားထားတတ်တဲ့ လက်တွဲဖော်တွေဟာ သူတို့ချစ်ရသူရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဂရုမစိုက်တဲ့ (သို့) အပျက်သဘော တုံ့ပြန်တတ်သူတွေထက် အချစ်ရေးကနေ စိတ်ကျေနပ်မှု ပိုရရှိပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင် Barbara L.Fredrickson ရဲ့အဆိုအရ ကျေးဇူးတင်ခြင်း ကဲ့သို့သော အပြုသဘောခံစားချက်တွေက relationship တစ်ခုမှာ အရေးပါဆုံးအချက်တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ပုံမှန်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းက လက်တွဲဖော်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ ကူညီသလို relationship ကိုလည်း ခိုင်မာစေပါတယ်။
၂။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အချိန်ဖြုန်းမှု နည်းကြပါတယ်
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အလွန်အကျွံစွဲလမ်းခြင်းက သင့်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ Northcentral တက္ကသိုလ်မှ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ မိသားစုသိပ္ပံဌာနရဲ့ ဥက္ကဌ Darren Adamsonက ဆိုရှယ်မီဒီယာ စွဲလမ်းနေတဲ့ စုံတွဲတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သော အန္တရာယ် ၃ခုကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော communication ကနေ သင့်ကို အာရုံလွှဲစေပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ စုံတွဲတွေဟာ သူတို့အချင်းချင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကို အခြားသူတွေဘဝရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက သင့်အား လက်တွေ့မဟုတ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေထားမိစေပြီး သင့်ရဲ့အချစ်ရေးကို စိတ်ပျက်ခြင်းနဲ့ နောက်ဆုံးလမ်းခွဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာက ဖောက်ပြန်စေဖို့ အလားအလာတွေကိုပေးပါတယ်။
၃။ မကြာခဏ ပွေ့ဖက်ကြပြီး တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက်က ဆုပ်ကိုင်ထားလေ့ရှိကြတယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမှုအတွက် သဘာဝ လိုအပ်ချက်တွေရှိကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Binghamton တက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာပါရဂူတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Samantha wagner က လက်တွဲဖော်တွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက်တာမျိုး (သို့) တစ်ယောက်လက်ကိုတစ်ယောက် ဆုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးက လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်(သို့)နှစ်ယောက်စလုံးက အချစ်ရေးမှာ ရှောင်တဲ့ပုံစံကို ကျရောက်နေရင်တောင်၊ ခပ်ဝေးဝေးနေရတာကို ပိုကြိုက်ရင်တောင် သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးကို ခိုင်မြဲစေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Wagner နဲ့ သူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ၁၈နှစ်အထက် အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲ ၁၈၀ နီးပါးကို သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပြသကြတဲ့ ချစ်ခင်မှု အမျိုးအစား (ရှောင်ကြဉ်ခြင်း(သို့) စိုးရိမ်ခြင်း)အကြောင်း၊ သူတို့လက်တွဲဖော်တွေနဲ့ သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ ထိတွေ့မှုပမာဏ။ သူတို့ရဲ့အချစ်ရေးကို ဘယ်လောက်စိတ်ကျေနပ်မှုရလဲဆိုတာကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ လက်တွဲဖော်အချင်းချင်း မကြာခဏ ထိတွေ့မှု ပိုများလေလေ ဆက်ဆံရေးအပေါ် သူတို့ရဲ့ ကျေနပ်မှုက ပိုရလေဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
၄။ တူညီတဲ့အရာတွေ များစွာရှိပါတယ်
ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေက ဆွဲဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးရှိပေမယ့်လည်း ဘဝအပေါ်ထားတဲ့ အမြင်တွေ ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ တူညီတာက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် ခိုင်မာသော အခြေခံကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဝါသနာတူ စုံတွဲတစ်တွဲဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့ ကျိန်းသေကူညီပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒီတူညီတဲ့ အရည်အသွေးတစ်ချို့က အခြားသူတွေထက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တိုးတတ်မှုအပေါ် ပိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့ ဂျာမနီနိုင်ငံ Gesis Leibnize Institute မှ သုတေသနက ဂျာမန်စုံတွဲပေါင်း ၅၀၀၀နီးပါးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ၅နှစ်ကြာ စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပွင့်လင်းမှု level တူညီခြင်းက အတူတူနေရနိုင်ချေပိုများကြောင်း တွေ့ရှိပါတယ်။
၅။ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးတတ်ကြပါတယ်
အထူးသဖြင့် ငွေကြေးကိုင်တွယ်ပုံမှာ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်ကူးတွေရှိရင် ငွေကြေးပြဿနာတွေက စုံတွဲတွေမှာ သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတနာတစ်ယောက်က အသုံးအဖြုန်းကြီးပြီး နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်တွေကိုသာ အာရုံစိုက်နေပေမယ့် အခြားတစ်ယောက်က ချွေတာပြီး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကို အာရုံစိုက်နေတယ်ဆိုရင် ပဋိပက္ခအရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် လက်တွဲဖော်တွေဟာ မတူညီတဲ့နေရာတွေကို သွားချင်ကြပြီး အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုရင် သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးကို ခိုင်မြဲစေနိုင်ပါတယ်။ American Psychological Association ဂျာနယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဒီလမှာ တစ်ယောက်က စုဆောင်းမှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းကို တာဝန်ယူပြီး နောက်လမှာ ငွေရေးကြေးရေးကိုင်တွယ်ခြင်းပိုင်းပေါ် တာဝန်ယူဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုက အခန်းကဏ္ဍတွေကို ခွဲထားဖို့နဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စအားလုံးမှာ အတူတကွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က သစ္စာရှိကြပါတယ်
relationshipမှာ သစ္စာရှိမှုက လက်တွဲဖော်နှစ်ယောက်လုံးဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုကို လက်ခံဖို့ သဘောတူတဲ့အခါ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါက စုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ တစ်တွဲ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို သတ်မှတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို ကိုယ့်ပါတနာနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ္စာရှိမှုကို နားလည်ခြင်းက လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကွဲပြားနိုင်တယ် ဆိုသော်လည်း သင့်အချစ်ရေးက အမှန်တကယ်လေးနက်မှုရှိ/မရှိကို ပြောပြနေတဲ့ လက္ခဏာအချို့ရှိပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာပါမောက္ခ Kelly Campbell က သစ္စာရှိစုံတွဲတွေဟာ အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း ကဲ့သို့သော တစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို တစ်ယောက်က ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်
သူတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ စိတ်ကျေနပ်မှု မြင့်မားပါတယ်
မဖောက်ပြန်တတ်သလို သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က ဆွဲဆောင်မှုရှိသူတွေကို သတိတောင်မပြုမိပါဘူး။